पक्राउ परेका ठगीका दुवै आरोपी धरौटीमा रिहा, मूल आरोपीसहित ९ जना अझै फरार – Health Post Nepal
पक्राउ परेका ठगीका दुवै आरोपी धरौटीमा रिहा, मूल आरोपीसहित ९ जना अझै फरार
२०७५ चैत १८ गते १८:२५
विद्यार्थीसित अवैध शुल्क उठाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारी सोमबार धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायधीश लालकाजी श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवैजनालाई जनही १७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । कलेजका परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा र पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल पक्राउ परेको एक महिना पुग्नै लाग्दा धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा २१ फागुनमा कास्की प्रहरीले ठगीका आरोपीविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउपुर्जीपछि २२ फागुनमा पक्राउ परेका दुवैजनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले न्यायाधिवक्तामार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले शुक्रबार र आइतबार दुवै आरोपीसँग बयान लिएपछि सोमबार धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
‘ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी ऐन ११८ को दफा ५.१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालबाट जनही रु १७ लाख नगद धरौटी, सोबराबरको जेथा–जमानत वा बैंक ज्ञारेन्टी दिए तारेखमा राख्नू, दिन नसके मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी ऐन अ.बं. १२१ नम्बर तथा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी ऐनको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी जिल्ला कारागार कास्कीमा पठाउने गरी आदेश पर्चा गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
आरोपित पूर्वसिइओ सन्तोष खनालले अपराध नै नगरेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो कसुर कहाँनेर देखिन्छ ? हामीले के अपराध गरेका छौँ,’ आदेशपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अदालतको आदेश हामी स्वीकार गर्छौं र सम्मान पनि छ । अब अदालतकै आदेशअनुसार अघि बढ्छौँ ।’ उनले मिडियामा आएका समाचारका कारण आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताएका छन् ।
सरकारले उपत्यकाबाहिरको मेडिकल कलेजका हकमा एमबिबिएस पठाइबापत अधिकतम ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । कजेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अवैध असुली फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै १६ माघदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलेज सञ्चालकविरुद्ध १ करोड ८२ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
पक्राउपुर्जी जारी गरिएका कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण शर्मा, लेखाका कर्मचारी हरिमाया पौडेल, कृष्ण घिमिरे, कर्मचारी तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, विश्वराज घिमिरे अहिले फरार छन् ।
कलेजका विद्यार्थीले पटक–पटक गरी प्रहरीसमक्ष ५ वटा जाहेरी दिएका थिए । १ भदौअघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महलअनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, १ भदौपछिको कसुरका लागि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो ।
उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भने सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । सञ्चालकहरूले ५३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप छ । सोमबार धरौटीमा रिहा भएका परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्माले भने आफू कलेजको सञ्चालक नभएको बताएका छन् । आफू कलेजमा वैतनिक काम मात्रै गर्ने र आफ्नो कुनै सेयर नरहेको उनले बताए । पूर्वसिइओ सन्तोष खनालले पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र सेयर सदस्य पनि नभएको दाबी गरेका छन् ।
कलेजले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त १५ लाखसम्म अवैध असुल गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू रकम फिर्ताको मागसहित २१ माघमा कलेजमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले परीक्षासमेत छोडेर आन्दोलनलाई जारी राखेपछि केन्द्रीयस्तरबाट चिकित्सकको टोली खटाई कलेजको स्थलगत जाँचसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विवाद चुलिँदै गएपछि शिक्षामन्त्रीले अवैध असुलीको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
गण्डकी मेडिकल कलेज